gooni's Content - Page 4 - Somali Forum - Somalia Online
Tima cadde Don't listen this sick old man.get your own knowledge and freedom of mind. Diyaarada hargaysa laga dhex taagay dhalintaa loogu tala galay inay madaxa ugasoo dhacdo ayagoo mugdi dhex fadhiya.
Ma jiro xildhibaan matala gobolkii lagasoo doortay dhamaantood marka laysku daro kumana noqon karaan gobolada ay matalaan. Balse waxaa jira xildhibaano qabiiladooda si xun ugu matala baarlamaanka ama kula fadhi dirara beelo kale sida, puntland, jubaland iyo banadirland iwm. maslaxada guudna ka jecel tan gaarka loo leeyahay. Si kale hadii loo dhigo kuligood waa isku nadaam ama hooyooyikii gooni isu taagga iyo kala firdhadka. Waqooyiga waa ku jiraan undercover u adeega danaha xagjirka snm oo fitno ka shaqeeya, laakiin waxaa qariya dhibkooda inta qalbiga fiican oo shaqadooda ka adag khayaanada dalkoodana neceb.
Waa bilaabatay uncle tim is back.
Suldaan. Dawladuhu intay habeen riyoodaan dawlado kale goboladooda iskama dhisaan. Mahad celin iyo maslaxad labo dal bay dhex martaa, gobol soomaaliya ka mida cidna waxba ma waydiin karin samankii siyaad barre. Qoondada mashaariicda iyo maaraynta canshuuraha dawladaa ka masuula. Intaas wax aqoonyahan fahmi waayay ma'ahan laakiin rag iska celin yaa ku madax martay. Tan abu dabai corridor aad ku sheegaysaan deeq ma'ahan waa heshiis. heshiisna wuxuu dhex maraa labo dal oo xor ah. Waa baadil iyo fara gelin, faa'iido laga doonayo waana xadgudub dal xor ah arimihiisa gudaha lagu fara galiyay. Waajibka saaran madaxweyne kastoo soomaaliya waa inuu dalkiisa wuxuu ku difaaci karo sameeyo asagoo raacaya sharuucda aduunka u taal. Ma qabo in carab snm ka jeceshahay Yemen. Waxaa gacanta kugu dhagan ma'ahan cadaw sidaad hadalka u dhigaysaan waa gacal aad beri inkiri doontaan abaalkiisa sidii siyaad barre allaha u naxariisto.
Ruush iyo maraykan iyo imaaraad intuba waa joogaan 30 sano oo aad nabad haysaan maxay idiin daawanayaan? Maal-gelintuna waa sadaqo sidaad sheegaysaan, maxay u joojiyeen siyaad barre ka dib? Waa jawaab sahlan laakiin caruurta rafaadin karta. Maslaxadda dal jira baa laga yashaa bilaash ma'ahan, dad meel ku oodan lagama yeesho very simple. Siyaad barre intuu waqooyi u qabtay 100 sano ku keeni maysaan. Ajarka dadka safra yaa laga helaa ama wax dhoofsada snm iyo caruurta la habawday lagama rabo. Wax qabashadu ma'ahan inuu jeebkiisa lacag ka bixiyo waa maslaxado dawlado xor ah dhex mara. Hogaamiye aan tuug ahayn oo dalkiisa iyo dadkiisu u kala sokayn yaa qaban kara intaas iyo ka badan. Arrinta dadka kasoo jeeda ssc oo ku nool hargaysa waxay la mid yihiin qof kastoo soomaali ah oo jooga hargaysa. Qofkii ganacsanaya iyo kii aroosaya cidna wax u sheegan mayso, qawaaniinta xagjirka snm un iska ilaali. Hadii aad sadex xaas ku yeelato xoogaa lacagana hesho masaajidkaa loo badnaadaa, ciyaalkana abtiyaashood yaa loo daayaa afka ha la qaloociyeene inan layaal baad mar walba tahay. Reer gedo laas-caanood amuurahooda ma fara-geliyaan intaan ogahay, wayna kala fog-yihiin dhul ahaan, ilaa gabaygu u furmayo cidna kuma dhago hadli karto wax wanaagsan ma'ahan.
Reer puntland waa dad 5-jir, ku caqliyaysta, 10 jirna ku hana qaada, adiga muxuu kula yahay hadalka ccshakur ustaad tolmooge? Aniga aragtidayda ninkaanu waa reer mudug waa nin codkar ah wax badana dumar been usoo sheegay. Maqaamka muqdisho oo puntland ku sigatay inay soomaali uga baxdo wuxuu ka dhigay waxaan macno ku fadhiyin oo ah is tus doorasho lagu doonayo. Wuxuu kula taliyay siyaasiyiinta puntland inaysan wax aan jirin godob kaga gelin walaalahood usc. Halkaa waxa ka cad in "rag" turub bartay. puntland baa siyaasad taqaanana been noqotay. Hadaba su'aahu waxay tahay taladaas fiican siyaasiyiinta puntland ma qaadan doonaan mise UN 'kay garoowe ku sugi doonaan?
Xamar Waxaa iigu dambaysay 87'kii bushii 3aad, kuma dhalan sida gabadhu sheegtay. Balse waan ku caqliyastay dugsi hoose, sare ilaa shaqo qaran. Waxaan transit ku noqday wax ka yar saacad 2013 airport'ka muqdisho waxaan taagnaa diyaarada hoosteeda anigoo indhahayga marnaba ka leexin waayay badda oo midabkeedu ahaa buluug "tiq" ah. Ma fiirinayn quruxdeeda lakiin waxaan galay xasuus yaraantaydii igasoo martay meesha indhahaygu markaas hayaan oo ahayd jabal ama "jamal" aan kasoo boodi jirnay si aan biyaha hoose ugasoo noqono si dabaal xirfadaysan ku jirto. Waxaan ku imaan jirnay aniga iyo caruur kale si aad u dhib badan. Waxaan kasoo dusi jirnay siligga anagoo godkii muuri lugaha kusoo qoynay intaan hawada iska fiirino in wax diyaarada kusoo jirto yaan si dhaqso ah dhabaheeda orad ku goyn jirnay. Saacadaas waxaa i dawayn lahaa ingoo maqla guuxeeda balse nasiib daro buuqaa badnaa. Gabadhaan warkeeda beel hebel baa boondheere bar ka degenayd waxba kama jiraan. Cid qabiil daris ku ahayd muqdisho ma jirin haba yaraatee, xataa gobolada meeshii aabahaa shaqo loogu badelo yuu ku ilmo dhali jiray gurina ka dhisan jiray. Xamar waxay ahayd 13- degmo. Waxaa sanadahaas dhul bixin ka socotay xaafad bacaad ku taala oo gubadley la oran jiray oo xeebta xigtay, ma hubo inay kaaraan hoos tagaysay iyo laga doonayay xaafad gaara laakiin waxay ku socotay qorshe sax ah iyo dhulbixin dawladeed ah. Waxaan maqlay midiina markii la dhaafo tabakaayo madaw waxaa degay beel aan dawladu maamulin oo iskeed u qaramawday waxaa loo bixiyay kaxda. Waxaan kaloo maqlay xeryihii ciidanada iyo dhulkii isbitaalka xoogga ka dambeeyay waxay noqotay xaafad beelu degtay oo aan dawladu maamulin waxaa loo bixiyay dayniile. Ma garanayo degmada 16-aad meeshay ka sameeyeen. Muqdisho hadii la abaal marinayo xaqiiqdii way istaahishaa lakiin waxaa lagu abaal marin karaa inaysan beel gaar u yeelan hadiise dalkii beelo kala goosteen oo siligga aan laga dusi karin dad caadila oo ka dhashay dadkii loogu yimid asalkeedii hore gacanta ha loo geliyo. Haday inta bisleeyaan oo lawada faraxasho waxa mar walba faa'iidaya waa reer banaadir. Haday reer garoowe wax ka siiyaana dadka faa'iidaya waa reer banaadir dadku waa dhaqaale meeshii dad joogo yaa dhaqaale laga sameeyaa waa lasoo jiitaa oo waliba kursiga looga kacaa.
Tolmoge Hooyo ayadaa sheegatay anigu uma bixin. Waxay ku curatay siday sheegeen federaal waxay ku xijisay 4.5 Ma'ahayn markay dhalmo daysay inay caruurteeda inkirto. Siyaasiyiinta puntland intaa ka badan yaysan ceebayn shacabka soo jireenka ah oo qiimaha badan. Markay sharci iyo dastuur ka hadlayaan waxaa ku matala golaha shacabka xildhibaano kasoo jeeda puntland. Hadii ay u codeeyaan MAYA kuligood shaqadii loo igmaday way guteen. Hadii cod looga adkaado waa inay ixtiraamaan sharciga ay la wadaagaan soomaalida kale waana inay u hambalyeeyaan walaalahood. Laakiin geedka timirka aan hoos fariisano inta UN'ku noo imaanayo talo ma'ahan. Farmaajo asagaa matala puntland wuuna garanayaa waxa maslaxadda guud ku jirto iska adkaysta inta bad-xiranka lagu jiro. "Qab" aan daarada guriga dhaafayn macno samayn maayo ogolaada in laydiin taliyo si aad u talisaan. Siyaasiga puntland waxaad waydiisaa hadii laga gudbo 4.5 ma gobolaan gaar u haystaa baa lagu dooran doonaa oo maanta isbaarada u eg? mise wax wada yeelasho deeq iyo dadnimo uu qof kastoo soomaali ah ka iibiyo yaa lagu dooran doonaa?
gooni replied to Bootindheere's topic in Politics
Meesha waxa yaala waa dhaqan siyaasadeed. Waa maxay dhaqan siyaasadeed? Dhaqan siyaasadeed waa yaan horay loo socon ha layska daba wareego. Wax kala goyntu waa arrin khatarteeda leh laalkiin waa inaad geesinamadeeda leedahay. Puntland waa hooyo aan doonayn in caruurteedu guriga banaanka uga baxaan. Taariikhda muqdisho in beel yeelato puntland yaa u sabab ahayd, waa markay soomaalida u kala saareen beelo anagoo barwaaqo ku jirna qabyaaladna ka raysanay. Maantana ayagaa diidan inay miraha iska mayraan. 91kii yaa muqdisho lagu kala adkaaday dadkii ku adkaaday abaal marin bay rabaan dastuurkaa u ogol in wadanka beel walba meeshay joogto ka taliso. Guryaheenii niman sodon jir ah yaa deggan oo aan garanayn caasimadda iyo waxa laga hadlayo midnaba. Xoog hadii la waayo waa in xeel la helaa si wadanku horay ugu socdo. Usc 13 kursi yaa la siiyay inay muqdisho ku matalaan waa guul ayaga kaligood usoo hoyatay. Waxay la mid tahay adigoo gabar ka doonay reer usc, oo sooryo u siiyay 13 dhagax oo dahab ah. Haday wax kasoo celiyaan waa dhaqankii soomaalida lagu aqoon jiray, waana arrin wanaagsan. haday la aamusaan, ayagaa iska leh adiguna gabadha iska barakayso ayadaa barako badan. Puntland cidna u afduubnaan mayso intaas ka badan walaalayaal meelna nooma wadaan. Waan ka sharaf badnaan lahayn sidaan nahay maanta, hadii usc dhinac kastaba u adkaan lahaayeen, magaca waxa sameeya beel ma'ahan waa dal cidii doonta ha hogaamiso.
Punt land’s new love affair with Galmudug
Puntland waxaa alle siiyay shacab wanaagsan waligayna waan amaani intaan noolahay. Siyaasigooda, yaa mar walba khariban waana nasiib isku beegmay. Qoor'qoor way tijaabinayaan inuu sidii "xaaf" qaraab u baahanyahay iyo in kale waxayna miiska saaraan mar walba keychain calanka carabtu ku sawiran-yahay. Waxay hoy siiyeen sun-wa jameeca oo ilaa iyo hadda dhib ka dhex wada gobolada dhexe. Macnaha puntland waxay badeshay Ethiopia oo dalka laga burburin jiray wayna soo dhawaynayaan mucaarad kastoi hubaysan. Gobolada dhexe waxaa laga rabaa inay wax fahmaan oo iska daayaan isbaarada fikirka iyo tan jidka labadaba, dadkooda iyo dalkoodana u shaqeeyaan.
Sheekha khayr allaha siiyo, inuu nabad qaato wuu asiibay oo dhib intaa ka badan aan loo sii gaysan dadkiisa. Laakiin inuu snm halgan ku sheego waa meel ka dhac aan culamada u wanaagsanayn.
gooni replied to maakhiri1's topic in Politics
Waa hadal qiimo badan oo sax ah. Laakiin carabtaa waxay ku maah maahda من يقع في خطأ فهو إنسان ومن يصرعليه فهو شيطان Qofkii khalad ku dhaca waa bini-aadam balse qofkii kusii socda waa shaydaan. Walaalayaal, walaalo yaan nahay snm ma daawayn karto. Aduunka dad is dila waxaa ugu horeeyay haabiil iyo qaabiil samirkana waxaa baray "tuke" waa shinbir. Hadii qof ka dhintana 30 sano bay miiska oohin ka tir-tirayaan oo samirkeeda ma'leh. Hadaad dhahdo xaal qaado oo qowmiyadoo dhan hogaami iskuma kalsoona. Hadaad dhahdo siyaasadda geeska afrika bay ka hor imaanaysaa in la idin aqoonsado mana shaqaynayso,waxay oranayaan adinku na hor fariista oo noo geeya beesha calamka, si aan shacabka been ugusii sheegno. Aragtidayda waxaan qabaa in fanaaniintooda la maal geliyo ayagaa aakhirka noo keeni doona.
No need war anymore my friend,if we unite again we will be the best nation on earth. We got enough experience.
Amaantu haday xadka dhaafto waxaa laga yaabaa inay kusoo baxdo lacag uu lunsaday.
Wax walba oo wanaag ka iftiimo waxaa alle looga rajeeyaa inuu waafijiyo wixii khayr ku jiro. Mudug waxaa ku nool dadka soomaaliya ugu caqli badan siday ayagu aaminsanyihiin, waxaana xukumi kara nin ka caqli yar. Hadaan sii fasiro nin ayaga dhagaysta wax isku wadi kara dulqaad leh inuu geesi yahayna qarsan kara.
Maakhir Farmaajo wuxuu ogyahay in shacabku u af-duuban yahay mujaahidiin been abuura, waana tan keentay inuu qodabadiisa tiir uga dhigo is dhex-galka bulshada. Ninkan ay tacsidiisa diidayaan waa wiriye aqoonyahan iyo qoraa allaha u naxariisto waana nin wax kasoo asaasay snm. Xog ogaal yaa wax kula wadaagi kara miisaami kara meeshii dani ku jirto. Kala-taggu waa muqadas xal ma'ahan iminkaba ma wada joogno waana isku dhibanahay. Xag-jirka snm waxay guul ka dhigayaan beesha caalamka yaa na hor fariisatay. Beesha caalamku soomaaliya waxay u baratay beelo ahaan, uma yaqaanaan dhul ahaan. Snm waxay 30 sano ku fahmi waayeen 3 sano kuma fahmi karaan.
Adam barre waa nin kenyati ah kenyati,keenyaati kale lagu badelayna wax wayn ma'ahan. Laakiin arrinta soomaalida isaga qasan waxay tahay luuqadda soomaaliga waxaa ku hadla dadka aan wax mansib ah meelna ka hayn sida anigoo kale, adigoo kale iwm. Soomaali meel loo dhiibay oo aan "master" ama "sayid" lahayn labo sadex kama badna taariikhda inta la hayo. Tusaale Aadan barre wuxuu codsaday in maraakiib dagaal kenya kula wareegto badda laysku haysto asagoo ku hadlaya luuqadda soomaaliga. Weli waa nin tol ah oo la jecelyahay oo dadkiisa dhinac uga jira. Killinka 5aad waa la mid Ina iley wuxuu calankooda ka saaray qaybtii yarayd ee buluugga ahayd si dadku ugu abtirsado xabashi qofkii diidana madaxuu ka gooyay Wali waa nin tol ah oo la jecelyahay xaqdarana ku xiran. Faratoon wuxuu ku hadlayaa luuqadda snm wuxuuna caalamka ka codsanayaa in soomaaliya lakala gooyo. ardada laas-caanoodna wuxuu ku amray inay tuute gashadaan si ay qaranimada snm u ilaaliyaan. Waa nin tol leh marada uu meesha suray cid kor u fiirin karta ma jirto. Sidaa daraadeed walaalayaal huunooyin Iska daaya caadifadda nin aan dal kula wadaagin tol kuu noqon maayo.
Nin yaa beri sakaaraday, markaasaa islaantiisii rogi wayday nin kale oo dariskeeda aha bay oran jirtay ila rog-rog Maalinkii uu dhintay yaa mid kale usoo dhawaaday tacsi ka dibna si sarbeeb ah ugu sheegay inay ka war hayso asayda ka dib. Waxay ku tiri mid kale yaa ila rogrogi jiray marxuumka intuu xanuunsanaa. Edna dhakhtar hal eray lagama qorin berigii kacaanka odaygii cigaalna tacsi uma samayn waxayna ahayd liberal xor ah ama gabar soomaaliyeed wanaagsan. Maanta markay waynaatay waxay ahayd inay cuqdada ciyaalka kala dhex bexdo si ay u helaan noloshii ay kusoo raaxaysatay oo kale.
Waxaan aad uga xumahay inaadnan fahmi karin garaadka hadalkiisa. Ujeedka hadalkiisu waa cumaamad waxba laguma xoreeyo, cumaamadu "rag"bay rabtaa. Aragtidayda waa hadal garaad Wuxuuna u sheegaya dadkiisa inay muwaafaqa yeeshaan oo aysan noqon gaadiid reer u rarran.